Usoro nkebi nkebi faịlụ nkebi - [How to recover by 3 step]
Your location:Data recovery software>Step>ig>Usoro nkebi nkebi faịlụ nkebi
Usoro nkebi nkebi faịlụ nkebi
Etu esi edozi nsogbu nhazi usoro mgbe enweghị ike diski diski ike?
Kwụsị ka esi rụzie nkebi ahịrị ederede? Thezọ kachasị mfe bụ usoro. Operationkpụzi ọrụ dị mfe, ị nwere ike iji usoro nhazi Windows, ị nwekwara ike iji arụ ọrụ Bplandatarecovery. Agbanyeghị, tupu ịkpụzi, ịkwesịrị inyocha na enwetala data furu efu!
Pinye aka na draịvụ draịva na-anọchite anya draịvụ draịvụ ekwentị ahụ na kọmputa wee họrọ nhọrọ “Usoro”; mgbe nke a mechara pịa bọtịnụ “Malite” na mpio mmapụta ahụ. Ihe siri ike n’agha ihe na-akpata draịvụ draịvụ ekwentị agaghị emepe emepe ọsịsa
Na-akpata mkpanaka Enwere ọtụtụ ihe kpatara diski ike iji mepụta nhazi ngwa ngwa, nke nwere ike ịbụ ihe arụmụka ma ọ bụ ọdịda anụ ahụ. Taa, onye nchịkọta akụkọ chịkọtara ụfọdụ ebumnuche ndị a na-ahụkarị, ma na-enye echiche maka onye ọ bụla iji chọpụta ihe kpatara ya na ụzọ edozi. Usoro mmebi nkebi sistemụ: sistemụ faịlụ a bụ usoro ịchekwa na ịhazi data, ma na-enye usoro iji nweta data dị n'okpuru. Usoro faịlụ ahụ na - ekewa ohere nchekwa disk n'ime ọtụtụ nkeji, ma ọ bụ maka ịdekọ faịlụ ndị a na-ekenye ngalaba nchekwa. Ọ bụrụ na usoro faịlụ ahụ mebiri emebi, sistemụ arụmọrụ agaghị enwe ike ịnweta data ahụ na nkebi. Ebe ọ bụ na arụmọrụ usoro ahụ nwere ike iwughachi sistemụ faịlụ ahụ, mgbe nkebi ahụ mebiri, usoro ahụ na-egosipụtakarị na ọ dị mkpa ka usoro ya rụọ. systemdị sistemụ akwadoghị: computerdị kọmputa anaghị akwado ụdị sistemụ faịlụ nke draịva draịvaị Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na draịvụ draịvụ ekwentị na-eji ụdị sistemụ Linux dị ka EXT4, a na-ejikọ draịva lile disk na kọmputa Windows. Will ga-akpali kpaliri. N'okwu a, ịnwere ike itinye diski mkpanaka ahụ na gburugburu Linux iji gụọ data ahụ, ma ọ bụ nwee ike iji ngwanrọ Bplandatarecovery gụọ ma dee nkebi EXT4 n'okpuru Windows. Ike ọkọnọ nke ọdụ ụgbọ USB ezughi oke: diski ike mobile, dịka igwe diski nkịtị, na-adabere na diski ime maka ịgụ ihe na ide ederede, na mkpa ọkọnọ ike dị elu. Ọ bụrụ na ike ọkọnọ nke ọdụ ụgbọ USB ezughi ezu ma ọ bụ ejighị ya ike, ọ ga-emetụta arụmọrụ nkịtị na-ede ma na-akpata ọgba aghara data. Ejighị arụmọrụ na-ekwesịghị ekwesị: Ọtụtụ ndị ọrụ anaghị pịa akara ngosi nhichapụ ngwaike tupu iwepu mkpanaka diski mkpanaka, mgbe ụfọdụ, a na-ewepụ diski diski mkpanaka ozugbo mgbe sistemụ arụchaghị ma na-ede arụmọrụ, arụmọrụ ndị a bụ ihe niile. Nwere ike iduga ozi ndekọ ma ọ bụ mebiri emebi, nke na-efu ma ọ bụ mebiri emebi. Ngalaba ọjọọ ga - eweta ọtụtụ nsogbu, dịka akụkụ na - agaghị emeghe, akụkụ nke furu efu, ngwa ngwa diski diski belatara. Wdg. Mgbe mkpịsị aka draịvaị mkpali na-akpali, ma ọ bụrụ na data ahụ dị mkpa karịa, emepụtakwa nkebi ahụ, emekwala nyocha disk na arụmọrụ ndị ọzọ. Ihe mbụ ị ga - eme bụ mgbake data. Soro usoro nkuzi a dị elu site na nzọụkwụ iji naghachi faịlụ furu efu. Ọ bụrụ na draịvụ mkpanaka nwere ọtụtụ ihe ọjọọ yana sọftụwia enweghị ike i scanomi, ị nwere ike ịkpọtụrụ ndị ọkachamara na Bplandatarecovery maka otu esi edozi.
PreIweghachite nkebi mgbe emezighi mmụọ
NextWeghachi data disk diski tupu ehichapụ faịlụ